သမီးစံ: December 2011
မနေ့ညတစ်နာရီလောက်က.မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်မှာ.'အုံး'ခနဲ 'မြည်' ပါသတဲ့ရှင်။
ဒီနေ့..နှစ်ဆယ့်ရှစ်ရက်ကို..(သမီးစံ)လွန်ခဲ့တဲ့.ရက်တော်တော်ကြာကြာကတည်းက.မွေးနေ့တစ်နေ့မှန်း သိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်..ဒီပို့စ်တင်ဖို့.အချိန်တော်တော်ရပါတယ်။အချိန်ရလွန်းလို့.ခုမှရေးဖြစ်ပါတော့တယ်း)။ (မအားဘူးဆိုတာလဲ..ကိုယ့်ဘာသာ.တစ်ယောက်တည်းလုပ်ပြီး.တစ်ယောက်တည်းရှုတ်နေတာပါ)။
အခုဖော်ပြပေးမယ့်..ဒီဇင်ဘာ..နှစ်ဆယ့်ရှစ်ရက်(အသက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါး)ရဲ့.မွေးနေ့ရှင်ကတော့.. (သူမအား...)
မဒမ်လွင်ပြင်ဟုသော်လည်းကောင်း၊ (မောလိုက်ထာ..ရေသောက်ဦးမှး)
ကဗျာရေးတဲ့ဖက်မှာ.(နှစ်ဦးစလုံး).ပါရမီ..တော်တော်“ပါ”တဲ့..ဘလော့ဂါကိုလွင်ပြင်လှိုင်းငယ်ရဲ့.ရှုမငီးတဲ့ ချစ်ဇနီးချော Jasmine Cho ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ (သူတို့နှစ်ဦးက စိတ်တူကိုယ်တူ..ဘလော့ဂါမောင်နှံပါ၊း)
(ခုဆို..သမီးတောင်..တော်တော့မယ်..ဆိုပါတယ်။ မိစံတို့ကံကောင်းဂျက်း)
အရင်ဆုံး..Birthday Wish လုပ်ပါမယ်။
အစာပြေ.စားထားအုံးနော်..မချက်ရသေးဘူး (နှစ်ယောက်တစ်ခုနော်း)
“မွေးနေ့ရှင် မာမီဂျက်....(မိတ်ကပ်ပြင်တာဟုတ်ဘူးနော်.. ဟိဟိ)
at December 24, 2011 31 comments:
at December 19, 2011 28 comments: